ပြင်သစ်သရုပ်ဆောင်သမိုင်းဝင်အပြေးပြိုင်ပွဲ, Pari Mutuel Urbain သည်အွန်လိုင်းဂိမ်းစျေးကွက်စတင်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှ စ၍ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲခဲ့သည် 2010. PMU.fr သည်သုံးစွဲသူများအားမြက်ကိုသာအာရုံစိုက်ပြီးအားကစားတွင်လောင်းကစားသို့မဟုတ်လောင်းကစားခြင်းကိုသာခွင့်ပြုသည်.
သင်အားကစားလောင်းကစားကိုနှစ်သက်လျှင်, PMU Sport အသစ်သည်ဖောက်သည်တစ် ဦး စီအားအပိုဆုကြေးတစ်ခုပေးသည် 100 ယူရို. http မှစာရင်းသွင်းခြင်းအားဖြင့်://paris-sportifs.pmu.fr/, ရှုံးနိမ့်ပါကသင်၏ပထမဆုံးလောင်းကြေးကိုပြန်အမ်းမည်, ၏ကန့်သတ် 100 ယူရို.
အာရုံစူးစိုက်မှု, သို့သော်, PMU sport turf ဆုကြေးများကိုအပိုဆုကြေးတစ်ခုဖြင့်စုဆောင်းရန်မဖြစ်နိုင်ပါ 100 ယူရိုနှင့် PMU ၏ဖဲချပ်ဆုကြေး 25 ငွေမသွင်းဘဲယူရိုငွေကိုသင်၏သွင်းငွေကိုသင်၏လုပ်ဆောင်မှုပေါ် မူတည်၍ ရွေးချယ်ပါ. သငျသညျ PMU အားကစားဆုကြေးငွေ၏အားသာချက်ကိုယူချင်လျှင်, သင်၏အကောင့်ကိုဖွင့်သောအခါ "SPORT" နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်သည်.
ဒီ PMU ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။ 2020?
အကောင့်ဖွင့်ပြီးနောက်, PMU အားကစားများသည်သင့်အားငွေကြေးပေးလိမ့်မည် 100% အကယ်၍ သင်၏ကန့်သတ်ချက်အထိသင်ရှုံးလျှင်ပထမအလောင်းအစားဖြစ်သည် 100 €.
ဥပမာအားဖြင့်, ထံမှပထမ ဦး ဆုံးအလောင်းအစားပျောက်ဆုံးပြီးနောက် 20 €, ဆိုက်ကသင့်အားငွေပေးချေသည် 20 သင့်ရဲ့ကစားသမားအကောင့်ပေါ်€. ထံမှပထမ ဦး ဆုံးအလောင်းအစားပျောက်ဆုံးပြီးနောက် 100 €သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသည်, မင်းပြန်ကောင်းလာ 100 €.
မှ 22 မှာ 31 ဇန်နဝါရီလ 2020, ဂိမ်းခရက်ဒစ်များကိုပြန်ဖွင့်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းဖြင့်၎င်းကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖျက်နိုင်သည်. ဤသည်မှာ PMU သည်အားကစားလောင်းကစားဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိရန်ငွေသားကမ်းလှမ်းခြင်းဖြစ်သည်။!
ပထမငွေသွင်းငွေပမာဏနှင့်တစ်ဆင့်အဆင့်ဆင့်ဥပမာ 50 € :
ဤ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် PMU အတွက်မှတ်ပုံတင်ပါ.
SPORT frame ထဲရှိကုဒ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ "ကျွန်တော်ကြိုဆိုပါတယ်. »
သင်လောင်းကြေးဆုံးဖြတ်သည်ဖြစ်စေ၊ 50 ယူရိုသည်ပြင်သစ်နှင့်ပီရူးတို့အကြားတွင်သရေကျခြင်းဖြစ်သည် (Rang 4).
သင်နိုင်ရင်, သင့်အနေဖြင့်ပြန်အမ်းငွေကိုခွင့်မပြုပါ, သင်တို့မူကားနိုင်ကြ၏ 50 x4= 200 €!
သင်ရှုံးမယ်ဆိုရင်, မင်းရတယ် 25% မင်းရဲ့ 50 € (ဘယ်မှာလဲ 12,50 €) in 10 ရက်ပေါင်း.
သင်၏အကောင့်သည်ကစားသမားအားအတည်ပြုပြီးသင်လက်ခံသည် 75% (37.50 €) in 10 ရက်ပေါင်း.
PMU အားကစားအပိုဆုကိုမည်သို့ကောင်းကောင်းသုံးရမည်နည်း ?
သင်ပထမအကြိမ်လောင်းလျှင်ရှုံးပါကအစားထိုးပြီးနောက်, အာရုံစူးစိုက်ပါ။ အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်လွှတ်ခြင်းမပြုမီတစ်ကြိမ်သာအကျုံး ၀ င်ပါလိမ့်မည်.
အပိုဆုကြေး FreeBets ကဲ့သို့အလုပ်လုပ်သည်, ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ PMU အားကစားလောင်းကစားအကောင့်မှငွေပေးချေခြင်းဖြင့်လောင်းထားသောအလောင်းအစားများသာဖြစ်သည်.
ပေးဆောင်ပမာဏနှင့်အတူ, သို့သော်သင်လောင်းနိုင်သည် 100 ယူရိုသို့မဟုတ်အများအပြားအလောင်းအစားသို့ခွဲ (ဥပမာအားဖြင့် 10 paris 10 ယူရို) သင်ပြန်ဆပ်၏အပြည့်အဝငွေပမာဏကိုပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှီတိုင်အောင်. ဥပမာအားဖြင့်အားကစားဆုကြေးငွေဖြစ်သော BetStars ကဲ့သို့သောအခြားပလက်ဖောင်းများတွင်ထိုသို့ဖြစ်သည်.
PMU အားကစားဆိုင်ရာလောင်းကစားအစီအစဉ်များသည်အန္တရာယ်များကိုကန့်သတ်ထားစဉ်ငွေရှာရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်. PMU ကမ်းလှမ်းမှုသည်သင်ပေးဆောင်သောအပိုဆု ParionSport ထက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်သည်
ရေတွက် 150 ယူရို. သို့သော် PMU အပိုဆုကြေးများသည်အပိုဆုကြေးအဖြစ်ဆွဲဆောင်မှုရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးအနိုင်ရသည့်ငွေကြောင့်ဆုတ်ခွာရန်အတွက်တစ်ကြိမ်ကစားလိမ့်မည်.
http အတွက်မှတ်ပုံတင်သည့်အခါသတိထားပါ://paris-sportifs.pmu.fr/ ကိုသင်၏အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်ကိုရိုက်ထည့်ပြီးသင့်အကောင့်အားအတည်ပြုခြင်းအတွက်စာရွက်စာတမ်းများယူဆောင်လာရန် 30 ရက်ပေါင်း. ဒီအဆင့်ကပြန်အမ်းငွေအတွက်အရေးကြီးတယ်.
PMU တွင်ငွေသွင်းခြင်းနှင့်ငွေထုတ်ခြင်းပြုလုပ်နည်း ?
သင်၏လောင်းကစားလိုင်းကို PMU.fr တွင်ပြုလုပ်ရန်, ပထမ ဦး ဆုံးသင်ငွေသွင်းရန်လိုအပ်သည်. အဲဒီအတွက်, PMU သည်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုပေးသည်. ဒီတော့, သင့်မှာခရက်ဒစ်ကဒ်မရှိရင် (သို့) အင်တာနက်မသုံးချင်ရင်, အခြားနည်းလမ်းများ.
PMU.fr ဖိုင်အတွက်, အောက်ပါသိုက်နည်းလမ်းများမှရွေးချယ်ပါ:
အားလုံးနီးပါးခရက်ဒစ်ကတ်: ဗီဇာ, MasterCard, အီလက်ထရွန်…
Paysafecard: ဆေးရွက်ကြီးဘားမှာရရှိနိုင်, အကယ်၍ သင်၏စစ်ဆင်ရေး၏ဉာဏ်ပညာကိုသင်မလိုချင်ပါကသို့မဟုတ်မြေပုံမဆွဲလိုလျှင်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်
Billets ပရီမီယံ: paysafecard မှတူညီတစ်ခုစစ်ဆင်ရေး
ဘဏ်ငွေလွှဲ (တစ်နောက်ဆုံးနေ့ရှိပါတယ်3မှာ4ရက်ပေါင်း)
ငွေသားထုတ်ယူရန်အတွက်, တစ်ခုတည်းသောလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသောနည်းလမ်းသည်ဘဏ်ငွေလွှဲဖြစ်သည်. ၎င်းသည်ပြင်သစ်ဥပဒေအရလိုအပ်သောကြောင့်အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားသူလိုင်စင်အတွက်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။. သငျသညျပမာဏကိုကနေလွတ်လပ်မှုအောင်ပွဲရယူနိုင်သည် 15 ယူရို.
အားကစားခံစားရန်အတွက် PMU အပိုဆုကြေး, http သို့သွားပါ://paris-sportifs.pmu.fr/
အားကစားလောင်းခြင်းအပိုဆုကမ်းလှမ်းချက်များကိုရှာပြီးနှိုင်းယှဉ်ရန်, အခမဲ့အားကစားလောင်းကစားစာမျက်နှာကိုသွားပါ. သင်သည်ဤအပိုဆုစာမျက်နှာများတွင်တွေ့လိမ့်မည်, အရာဆုကြေးငွေ ParionsSport နှင့်ပြင်သစ်စျေးကွက်အပေါ်အားလုံးကမ်းလှမ်းမှု.
အကယ်၍ သင်သည် Poker အတွက်ဘောနပ်စ်ကိုစိတ်ဝင်စားလျှင်, ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ Texas Holdem poker ကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ
Previous Previous post: PMU ပြင်သစ်
Next Next post: ပြင်သစ် Unibet